Hitan’ny kiadin’ny aterineto misy lesoka ny fanafenan-tsoratry ny fampihatra tsy maintsy apetraka amin’ny lalao olaimpika shinoa · Global Voices teny Malagasy
Torohevitra ny hampiasan'ireo mpanatrika lalao Olaimpika burner phone ao Shina
Voadika ny 28 Janoary 2022 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, русский, Español, English
Pikantsary tamin'ny fampiharana MY2022 tamin'ny alàlan'ny Citizen Lab.
Hitan'ny Citizen Lab, kiadin'ny fahalalahan'ny aterineto any Toronto, misy lesoka “mandravarava” izay manohintohina ny fifandraisana manafin-kafatra ao amin'ny fampiharana finday My2022, fampiharana manaramaso ny fahasalamana tsy maintsy atao ho an'ireo mpanatrika rehetra amin'ny Olaimpika Ririnina any Beijing. Hahatonga ny angon-drakitra manokana – toy ny rakitra feo, ny toe-pahasalamana, ny mombamomba ny pasipaoro, ny fitsaboana ary ny tantaran'ny dia – ho mora tratran'ny fanararaotana ataon'ny olon-kafa ny lesoka amin'ny fiarovana.
Namoaka fanairana amin'ny fomba fanaraha-maso mielipatrana any Shina koa ny orinasa iray hafa momba ny fiarovana ny aterineto, Internet 2.0 ary nanoro hevitra ireo mpanatrika avy aty ivelan'i Shina hamela ny findainy ao an-trano ary hampiasa burner phone – telefônina mpamafa tanteraka – ao Shina.
Nesorin'ny Komity Olaimpika Iraisampirenena (CIO) na izany aza ny fanadihadiana ara-piarovan'ny Citizen Lab ary nantitranteriny fa “tsy misy ny lesoka goavana” araka ny fanombanana nataon'ireo fikambanana roa tsy miankina nitsapa ny fiarovana anjotra ny fampiharana ara-pahasalamana ao Beijing.
Takiana 14 andro alohan'ny sidina mankany Shina ireo atleta, mpanao gazety ary ireo mpanatrika ny Olaimpika Ririnina any Beijing rehetra mba hampiasa ny fampiharana My2022 . Takiana ireo mpisera mba handefa amin'ny alàlan'ny fampiharana ny torohain'ny fahasalamana sy ny fivezivezena, ao anatin'izany ny valin'ny fitiliana COVID-19 sy ny taratasy fanamarinana vaksiny. Ahitana vaovao, hafatra am-peo sy horonan-tsary, ary fizarana rakitra ihany koa ny fampiharana fanaraha-maso ara-pahasalamana .
Navoaka tamin'ny 18 Janoary, nilaza ny tatitry ny Citizen Lab fa tsy afaka manamarina ireo sertifikà SSL amin'ny lohamilina dimy farafahakeliny ny fampiharana My2022 ary mety ahafahan'ny mpanafika misintona ny fifandraisana voaafintsoratra sy mangalatra angon-drakitra an'olontsotra amin'ny fampiharana mamitaka ka mampifandray amin'ny mpampiantrano sompatra ny fampiharana My2022 . Raha lazaina amin'ny teny hafa, nanakana ara-bakiteny ny fiasan'ny fanafenan-kafatra ny lesoka.
Fanampin'izay, nahita ihany koa ny fikarohana fa misy lahatahiry saro-pady sasany nampitaina tamin'ny alalan'ny fampiharana mankany amin'ny mpampiantrano iray tsy misy fiarovana mihitsy, ka vokatr'izany, “azo vakian'izay mpitsikilo mandalo, toy ny olona manana fidirana wifi tsy voaaro ny lahatahiry (angon-drakitra).”
Nahita lisitra sivana misy teny fanalahidy 2.000 ihany koa ny kiadin'ny fahalalahan'ny aterineto Kanadiana, anisan'izany ny teny saro-pady tahaka ny Xinjiang, Tibet, Dalai Lama, sns., voarakitra ao anatin'ilay fampiharana eo ambanin'ny anaran-drakitra “illegalwords.txt.” Saingy tsy navitrika ilay asa sivana.
Nanambara ny fikarohany tamin'ny CIO tamin'ny 3 Desambra 2021 ny Citizen Lab, ary namoaka fe-potoana 15 andro hamoahana valiny manandanja sy fe-potoana 45 andro ho fanentsenana ny lesoka. Namoaka ny tatitra nataony tamin'ny 18 janoary izy rehefa lany ny fe-potoana 15 andro.
Nandritra io andro io ihany, namoaka gazety (taratasy) ny Internet 2.0 mampiseho ny fiantraikan'ny lalànan'ny filaminam-pirenena Shinoa tamin'ny fitondran-tenan'ny orinasa tamin'ny fanaovana tolo-tanana amin'ny fanaraha-maso tamin'ny alalan'ny famolavolana ny fampiharana findainy. Nampitandrina ilay orinasan'ny fiarovana anjotra fa “ny atleta sy mpitsidika rehetra any Shina amin'ny Lalao Olaimpika dia hiharan'ny lalàna sy ny kolontsaina fanaraha-maso toy izany.
Manoro hevitra bebe kokoa ihany koa izy ireo mba hampiasa telefônina vaovao misy kaonty mailaka vonjimaika ireo atleta sy mpitsidika ny Olaimpika rehefa ao Shina ary mampitandrina azy ireo amin'ny fampiasana ny telefônina mpamafa tanteraka aorian'ny fivoahany an'i Shina mba hisorohana ny angon-drakitra manokana avy amin'ny kaontiny cloud tsy ho voaangon'ny mpandraharaha sy fampiharana finday Shinoa.
Raha nolavin'ny CIO ny ahiahy momba ny fiarovana, dia nilaza tamin'ireo atletany ny Komitin'ny Olaimpika Amerikana mba hitondra telefonina mpandoro tanteraka any Beijing satria tsy maintsy “fantatr'izy ireo fa hojerena ny fitaovana sy ny fifandraisana rehetra, ho haraha-maso ny fifanakalozana sy ny hetsika an-tserasera rehetra” any Shina.
Nanakiana ny CIO ny vondrona atleta Alemà, Athleten Deutschland, nilaza fa “tsy hay hazavaina sy tsy tompon'andraikitra ny CIO mitaky amin'ireo mpandray anjara hampiasa fampiharana misy lesoka ara-piarovana mibaribary toy izany.”
Ho setrin'ny ahiahy iraisampirenena momba ny fiarovana, nanonona mpandinika teknolojia iray Andy Mok izay nandà ny tatitry ny Citizen Lab ho “fanafihana tsara rindra hamoronana fiantraikany ratsy ara-pifandraisana amin'ny daholobe amin'ireo Lalao Olaimpika ho avy” ny media sinoa vatsian'ny fanjakana ara-bola, CGTN. Manoloana izany filazana izany, namaly i Oliver Linow, manam-pahaizana momba ny Fahalalahan'ny Aterineto ao amin'ny DW hoe:
Liana amin'ny zava-misy sy ny porofo aho. Manome tatitra amin'ny antsipiriany ny @citizenlab, mangarahara avokoa ny rehetra. Nampahafantarina momba ny fahapotehan'ny fiarovana ny BOC tamin'ny 3 Desambra. Milaza ny CIO fa nodinihin'ireo fikambanana tsy miankina roa momba ny fiarovana ny fampiharana #my2022. Ny antsipiriany?